Bako rebheya mhuri: "Iyo yakanakisa prehistoric saga yakambotaurwa" | Zvazvino Zvinyorwa
Mhuri yeBako Bear
Mhuri yeBako Bear ndiro bhuku rekutanga nemunyori ane mukurumbira wekuAmerican Jean Marie Auel. Yakaburitswa muna 1980, ndeye prehistoric fungidziro yenhau, yakaiswa munguva yePaleolithic yenyika yeEuropean. Nebasa rekutanga iri saga yakatanga: Vana vevhu, iyo yatengesa mamirioni emakopi kupota nyika.
Iyo rondedzero inoratidza hudiki uye kuyaruka kweiyo protagonist yeakateedzana, Ayla, uyo kubva paudiki kwazvo akagara nherera, nekuda kwe kuti dzinza rake rakakurirwa naro Njodzi yakasikwa. Pakati pemitsara, zvinotsanangurwa kukura kunoita musikana mudiki munzvimbo ine hukasha, zvakasiyana zvakanyanya nemhoteredzo yaaimboita. Muna 1986, mutambo uyu wakashandurwa kuita firimu naMichael Chapman, achitamba naDaryl Hannah.
1 Pfupiso yeCave Bear Clan (1980)
2 Kuongorora kweCave Bear Clan (1980)
2.2.4 Vamwe vatambi
2.3 Mhedzisiro chaiyo
4 Biography yemunyori
4.1 Zvinyorwa zvemitambo
4.2 Jean Marie Auel mabhuku
Pfupiso ye Mhuri yeBako Bear (1980)
ayla iye musikana we 5 makore yeCro-Magnon mavambo, uyo kudzungaira nenyika isina chinhu nekuda kwekudengenyeka kwenyika kunotyisa. Kufamba kwake mukutsvaga kwaaigara - uko kwakanyangarika pamwe nedzinza rake - kunomutungamira kunzvimbo dzisingazivikanwe uye dzine njodzi zvakanyanya. Pakarepo, yakamisikidzwa ne enorme bako bako izvo zvinomusiya achifa nekukuvara kwakakomba.
Kune rumwe rutivi, kuzununguka kwakakonzeresawo kukuvara a rimwe boka revarume vekare, neanderthals, vaiva va Cave Bear Clan. Vaifanira kusiya mapako avo, vachitaura kuti vaive vabatwa nekutukwa nemweya yakaipa. Sezvo vaitiza vakawana musikana akakuvara, uye pakarepo, Iza - murapi - anoedza kumuponesa.
Creb, iyo mog-ur (shaman) yemhuri, anoona kuti musikana mudiki amaka ganda rako nayo chiratidzo chetem, iyo kwavari iri chiratidzo chemasimba. Wese munhu anoona kusiyana kwakaita Ayla; akasimba uye akasimba, iye akapfava uye akanaka. Izvi zvinokonzeresa kupokana maonero mumhuri, avo vanoita nharo mukufunga kuti vaenderere mberi nenzira naye here, kana kumurega achienda.
Kunyangwe paine kusangana, Iza anovimbisa Brun, mutungamiri weboka, kuti atore musikana uyu, achitaura - muchidimbu - kuti achange ari pasi pake. Kubva ipapo, Ayla anokura mumamiriro ezvinhu akasiyana kwazvo neake, sezvo dzinza rake raive rimwe rekubatana rakakwirira mukushanduka. Mukadzi wechidiki ane huchenjeri hukuru uye hunyanzvi nezvombo, pamusoro pekutaurirana nekuburitsa ruzha, chimwe chinhu chakashorwa pakati pevaNeanderthal.
Zvisinei nekurambwa nguva dzose nemhuri, Ayla achararama mukutsvaga kusingaperi kwekugamuchirwa. Kubatsira kubatanidzwa kwako, Iza anomudzidzisa ruzivo rwake semurapi, iyo yaanofungidzira nekukurumidza, asi iyo yaasingakwanise kuitisa nekuti iye haana iyo: "ndangariro yemhuri".
Uyu musikana wechidiki achapfuura nemazhinji macississitudes, asi iye anokwanisa kuzvikunda Kutenda kumweya wake wakasimba, sezvo iye ari kuchengetedzwa nebako totem totem.
Iyo Bear Mhuri ...
Analysis of Mhuri yeBako Bear (1980)
Iyo inoverengeka iri yejenasi nhoroondo yekunyepedzera, iyo inoitika muCrimea Peninsula, iri mukondinendi yeEurope. Bhuku racho rinoratidza Mapeji 560, yakakamurwa kuva Zvitsauko zvipfupi 28, inotaurwa nemunyori anoziva munhu wechitatu. Munharaunda yese, inotsanangura kuwirirana pakati pemadzinza maviri epamberi "MaNeanderthal neCro-Magnons."
Iye ari musikana wekuCro-Magnon wedzinza uye asina makore gumi nematatu ekuberekwauyo ndiye ega akapona kurudzi rwake. Ndiye mutambi, zvese zveiri bhuku uye resaga rese. Munyori anomutsanangura semusikana mutsvuku ane maziso ebhuruu; hunhu hwakajairika mudzinza ravo.
Ndiye murapi wekwaClan yebheya rebako, uye ndiani anochengeta Ayla sezvo vachimuwana akuvara zvakaipisisa. Zvishoma nezvishoma, achatora iyo Cro-Magnon diki semwanasikana mumwe, saka achaedza kumubatsira kuti dzimwe nhengo dzerudzi rwake dzimugamuchire.
Iyo ndiyo shaman - kana mog-ur - yevaNeanderthal vanofamba-famba, uyo aripowo Iza mukoma. Akaremara. Pamwe chete nehanzvadzi yake, ivo vachatarisira Ayla, saka iye anobatsira mukurerwa kwemukadzi mudiki.
Mukati merondedzero, mavara akasiyana kwazvo anosanganisirwa, pakati pazvo kumira: Brun (musoro wemhuri) naBroud (Mwanakomana waBrun). Mamwe mazita zvakare anomira, senge mazambiringa, Who mwanasikana Iza uye achaguma achikura sehanzvadzi yaAyla. Iyo nyaya ichaburitsa mazita evamwe vatambi vakaita se: Aba naDurc, avo vakanyanya kukosha muhupenyu hwe protagonist.
Kunyangwe iri zano rekunyepedzera, iyo literata inotsvaga mune yakavimbika ruzivo pane idzi subspecies dzejenasi Homo, izvo zvave zviripo yakanyorwa ne paleontologists kwemakore. Nekudaro, iwo rugwaro inopa yakawanda nhoroondo uye inodzidzisa zvinhu yemarudzi maviri aya, pakati pavo: maitiro avo ekuvhima, tsika, pamwe nerondedzero yakadzama nezvehunhu hwepanyama.
Mhuri yeBako Bear yakave nemamiriyoni evaverengi kutenderera pasirese, muiyo chete webhu kugamuchirwa kwayo muzana inodarika 90%. Vazhinji vanozviona se: "Iyo yakanakisa prehistoric saga yakambotaurwa". Kune chikamu chayo, papuratifomu yeAmazon chinyorwa ichi chine chiyero che4,5 / 5; uko vanopfuura 70% vakapa nyeredzi shanu kubhuku, uye chete 5% vakarikoshesa ne6 kana pasi.
Jean Marie Untinen akaberekerwa muChicago (Illinois) muna Kukadzi 18, 1936. Ndiye mwanasikana wechipiri wevaviri veAmerica vane chizvarwa cheFinland; amai vake: Martha Wirtanen; uye baba vake: Neil Solomon Untinen, mupendi wemba. Muna 1954, akaroora Ray Bernard Auel uye makore manomwe gare gare ivo vaitova neboka rakakura remhuri rine nhengo nomwe, vaviri vacho uye vavo Vanakomana vashanu.
Kutenda kune yake yepamusoro IQ, akabatana naMensa, mubatanidzwa wepasi rese wevane zvipo. Mushure mekupedza chikoro chepamusoro husiku, akadzidza kuPortland State University uye University of Portland. Akagamuchira madhigirii maviri ekuremekedza kubva kuMt.Vernon College uye University of Maine. Pazera remakore makumi mana, akawana MBA kubva kuYunivhesiti yePortland.
Pakupera kweyunivhesiti, Jean Marie akafunga kupaza mabhuku, Kune izvi, nzira yekuongorora pa Ice Age yakatanga. Mushure menguva yakareba yemabhaibheri ezvinyorwa zvepamberi uye kosi dzinoverengeka dzekupona, akafunga kugadzira saga yese, panzvimbo yebhuku rimwe chete. Chikamu chekutanga chaive: Mhuri yeBako Bear (1980), iyo yakava budiriro inoshamisa.
Kubva ipapo zvichienda mberi, iyo yekuAmerican mabhuku yakaburitsa mishoma mishanu yekupedzisa nhevedzano, yaakatumidza kuti: Vana vevhu. Aya manoveli akaiswa mune prehistoric Europe, iyo inotsanangura kushanduka kwemarudzi maviri evarume: maNeanderthal neCro-Magnons, pamwe nekudyidzana kwavo. Inofungidzirwa kuti anopfuura mamirioni makumi mana nemashanu emakopi akatengeswa pasi rose
Jean Marie Auel mabhuku
Saga Vana vevhu
Mhuri yeBako Bear (1980)
Mupata wemabhiza (1982)
VaMammoth Vavhimi (1985)
Mapani eTransit (1990)
Matombo ematombo (2002)
Nyika yemapako akapendwa (2011)
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Mhuri yeBako Bear
Berna González Harbour. Kubvunzana nemunyori weEl pozo
Zvese izvi ndichakupa